Track 12: Rehetra My Love — Trip LEE - OFISIALY SITE
Jay dia manambady sy ny fony ny tokony ho mihidy izy
Masìna hilatsaka izany intsony fa ny malemy ao
Ary Te ho very raha dia tsy mahazo mahita azy intsony, dia ny zavatra rehetra amin'ny olona
Baby tonga eto
Cause azoko Inona no ilainao
Ary tianao izany, tianao izany
Avia hahita Ahy intsony
Cause aho no miandry anareo hatramin'ny maraina
Ary mampanantena ny fitiavako rehetra
Mipetraka eto miandry anao vao tonga haka azy, azoko
Rehetra ny fitiavako
Mipetraka eto miandry anao vao tonga haka azy
Hey dia tsy mbola nahita ny tarehiny tahaka ny azy miampy ny andilany tsara
Tsy miady mafy, foana izy nihaona taminy tao amin'ny toerana iray ihany
Ny zazalahy nilaza taminy ny vadiny hilaza 'mahatonga izao dia tsy marina
Fa raiki-tahotra loatra izy, nisambotra azy izy tamin'ny farany ary dia miady
Teny nifanakalo izy toy “inona no anjara-raharahany izany ianao no mifraody
Efa nisy nahita zavatra hafa broads?”
Izy no kinda voafandrika izao, ary noho izany dia lamosiny teo
Izy no tokony hahatsapa ho toy ny ranon rehetra ny zava-misy ankehitriny
Noho izany dia milaza azy 'bout ny hafa tia
Ary ny faniriany fatratra ny fomba foana izy, hitily sary azy
Tena ny fiankinan-doha izany ny ratsy fanahy dia te-manamboatra azy
Fa ny fihetseham-po no ao aminy, izy ny tena nandroahako dia manomboka manontany tena
Izao va no mendrika izany? 'Mahatonga ny vadiny hoy izy gotta mifidy
izy tahaka, "Tsy azy na ahy ny fianakavianao anao bout hamaha"
Ary Jay nahazo ny BLUES, dia te niantsoantso
Cause dia tia izay vehivavy tsara tarehy teo amin'ny efijery
Ny Dude Jay dia amin'ny hazo fijaliana lalana
Nahatsapa izy fifaliana sy ny fahasambarana, fa very ireo
Mahatsiaro Toy Ny Anaty very fanahy nihazakazaka nidina ny diso lalana
"Ahoana no ahazoako eto?"
Izy amin'ny fotoana rehetra ambany ny
Ary ankehitriny ny niantsoantso izy niantsoantso
rava tahaka ny, "Ahoana no hahita ahy mihitsy aza izy avy?"
Avy eo izy dia nahatsiaro izy fa Andriamanitra dia tsy afaka ny vavony fotsiny
Ny ratsy fanahy dia ota sy faiziny mba handrava antsika izany
Ary dia mamely azy ny halalin 'ny ratram-nampanotany
Ny fomba nanome alahelo ny Tompo, izay nahantona tamin'ny hazo fijaliana izany maloto
Ny fomba manimba ny vadiny ny flirts sady efa nivadika kileman-toetra
Mety mikorontana manodidina ka very ny fianakaviany, Dia Nijanona kely
Izy maka ny solosaina findainy ny sary ny amin'ny resahana
Izy smashes azy amin'ny tantanana dia maka ny fako avy
Miantso ny vadiny ary ny fibebahana in-dranomaso
Ary milaza fa te ho natao nandritra ny taona maro
Ary Andriamanitra dia mihaino
Tish • Desambra 8, 2014 amin'ny 2:33 PM • navalin'i
Tsy hoe “ary noho izany dia handihy Dihy fa adinonao ny hoe:, sns…”? Ary toa miverimberina toa anao zavatra indroa.
Caitlin • Mey 26, 2016 amin'ny 11:03 PM • navalin'i
Ity hira ity dia nilaza mazava tsara ho ahy. Niady mafy tamin'ny vetaveta aho nandritra ny fotoana ela. Mbola hahazo alaim-panahy indraindray fa Andriamanitra no mahazo ahy amin'ny alalan'ny. Dia noravany koa nitomany raha nandre izany hira, satria na dia tsy manambady aho na inona na inona aho, na dia mbola miady mafy amin'ny mahazo fifandraisana. Misaotra betsaka noho ny fizarana ity hira ity!
Hotahian'andriamanitra anie ianao,